သောသီခို: NCCT ထိပ်သီးအစည်းအဝေး ကြန့်ကြာစေသည့် “တော်လှန်ရေး”
NCCT ထိပ်သီးအစည်းအဝေး ကြန့်ကြာစေသည့် “တော်လှန်ရေး”
သတင်းဖတ်မယ်လုပ်တော့ ဓါတ်ပုံမြင်လိုက်တာနဲ့ အရင်ဆုံးစိတ်လေသွားတယ်။ ကေအဲန်ယူဥက္ကဌဖြစ်သူက ဒီလိုတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ သမိုင်းဝင်မည့် ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကြီးမှာ ဟိုးရှေးဆုံးမှာထိုင်ပြီး ကိုယ်တိုင်ဗီဒီယိုရိုက်တာ တော်တော်ကို ပုံမလာဘူးဗျ။ မဖြစ်သင့်ဘူးဗျ။ ဘယ့်နယ်ကိုယ့်နောက်ပါသွားတဲ့ မှတ်တမ်းတင်မည့်လူတွေ မရှိတော့ဘူးလားဗျာ...
Written by Mizzima News
“တော်လှန်ရေး” ဟူသည့် စကားလုံးတစ်ခုကြောင့် လိုင်ဇာတွင် ယနေ့ကျင်းပသည့် NCCT အဖွဲ့ဝင် ခေါင်းဆောင်များ ထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွင် ကြန့်ကြာခဲ့ရသည်ဟု အစည်းအဝေးအပြီးတွင် ခေါင်းဆောင်ကိုယ်စားလှယ်များက ပြောသည်။
ထို့ကြောင့် ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံးဥက္ကဌ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စောမူတူးစေးဖိုး ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူထားသည့် ဦးဆောင်ကော်မတီက ဇူလိုင် ၂၅ တွင် ထိုအချက်ကို ဆုံးဖြတ်မည် ဖြစ်သည်။
တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့အစည်းများက “တိုင်းရင်းသား တော်လှန်ရေး လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်း”ဟု သုံးနှုန်းလိုသော်လည်း အစိုးရက “တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်း” ဟုသာ သုံးနှုန်းလိုသည်။
Posted by PKD at 5:29 AM
အဲ့ဒီလောက်ထိ အပြစ်ရှာနေတာတွေ ရပ်ပါတော့........ ကောင်းတာတွေတော့ မရိုက်တက်ကြဘူး....... တစ်ခုခုအမှားရှာပြီး
နှိပ်ကွက်ဖို့လောက်ပဲရှိတယ်.... ဘာလဲ ဇာတ်မင်းသားက တစ်ချိန်လုံးပဲ တောင်ရှည်ဝတ်ထားရမလား...... ??????
တရားဟောဆရာက ... တစ်ချိန်လုံး တရားပဲဟောနေရမလား...???? .. လက်ဝှေ့သမားတွေက .. တစ်ချိန်းလုံးပဲ .. ထိုးသတ်နေရတော့မှာလား... ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်... ကိုယ်ပိုင်အချိန်.... အဲ့ဒါတွေကဘာလဲ.... ??????
ဆီလို.. ယိုစရာ .. အပေါက်လိုက်ရှာနေမယ်ဆိုရင်တော့ လည်း .. သဘောပါပဲ.... သူများတွေ တကယ်အလုပ်လုပ်နေကြတဲ့
အချိန်တွေကို.. သေသေချာချာ လေ့လာစောင့်ကြည့်ပြီး.. ဘာလုပ်နေကြလဲဆိုတာကို... လေ့လာကြပါအုံး......
မင်းတို့ဟာကလည်း.... ဟိုမင်းကြီးက.... အိမ်တာတက်ဖို့ ... ဟိုဟာလှန်ရင်တောင်... ဟာမင်းကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး.. အဲ့လိုလှန်တာတော့မကောင်းဘာဘူး... ဒီအတိုင်းလွှတ်ထည့်လိုက်ပေါ့ဆိုရမလိုဖြစ်နေပါပြီး...................... :<(
July 25, 2014 at 9:40 AM
Lay Say said...
gase ပြောတာအားလုံးသိပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ တရားဟောဆရာတယောက်က စိန်ပေါ်တက်ပြီးတရားဟောတော့မယ်ဆိုရင်ဖြစ်ဖြစ် ဟောနေစဉ်ဖြစ်ဖြစ် ဗီဒီယိုမရိုက်တော့ပါဘူး။ လက်ဝှေ့သမားတယောက်က စိန်ပေါ်တက်ပြီးဆိုရင် ထိုးဘို့ပဲအာရုံစိုက်နေပါတယ် ဗီဒီယို ရိုက်ပြီးတခြားအာရုံစိုက်ပြီးလုပ်တာ တယောက်မှမတွေ့ရပါဘူး။ လူတိုင်းမှာကိုယ့်ကိုကိုယ်လွတ်လတ်မှုရှိပါလျှက်ဒါပေမဲ့ လူတိုင်းမှာအလုပ်လုပ်တဲ့အချိန် အလုပ်ပဲ အာရုံစိုက်လုပ်နေပါတယ် အလုပ်လုပ်တဲ့အချိန် လွတ်လတ်မှုယူတာမတွေ့သေးပါ
July 26, 2014 at 7:22 AM
KNLA တပ်မဟာ (၂) တောင်ငူခရိုင် အမည်ကို ပုံမှားရိုက်...
NCCT Members Summit Concludes With A Solidifying ...
KNU က စီး​ပွားေ​ရး​လုပ်ချင်တာြ​ငိ​မ်းချ​မ်းေ​ရ...
ပီအာရ်စနစ် ဘယ်လဲ ဘာလဲ
တန်းတူရေး၊ ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်နှင့် ဖက်ဒရယ်ပြည်...
ဗမာစစ်တပ်နှင့် ပလောင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်အကြား တိုက်ပွ...
လိုင်ဇာရောက် ကေအဲန်ယူ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ထုတ်ပြန်ခ...
အန်စီစီတီ အစည်းအဝေး ၂ ရက်အတွင်း တပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှ...
ဖယ်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကို အာမခံရင် ဝေါဟာရတစ်ချို့ကိုေ...
ဦးနေ၀င်းမြေး အေးနေ၀င်းနှင့်ကျော်နေ၀င်း ပိုင် OMNI...
တအန်းပလောင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်နှင့် ဗမာစစ်တပ်အကြား တု...
NCCT သက်တမ်း ရှစ်လကျော်သော်လည်း ခိုင်မာမှု တစ်ခုမျှ...
“တော်လှန်ရေး” စကားလုံးကြောင့် အပစ်ရပ်မူကြမ်းဆွေးနေ...
တနိုင်ငံလုံး အပစ်ရပ်ရေး ထိပ်သီးအစည်းအဝေးစတင်
NCCT ထိပ်သီးအစည်းအဝေး ကြန့်ကြာစေသည့် “တော်လှန်ရေး”...
ကေအဲန်ယူ တောင်ငူခရိုင်တွင် ကိုယ်ထူကိုယ်ထ အထက်တန်းေ...
The X Factor Australia 2014 - Second Week - တေးလက်...
အပစ်ရပ်မူကြမ်းပါ ညှိရခက်သည့်အချက်များကို ဆုံးဖြတ်မ...
သမိုင်းလိမ်တွေကို မြေလှန်ကြဖို့ 
ကေအဲန်ယူ - ဘိတ်ထားဝယ်ခရိုင် လက်ရှိအခြေအနေ
ကြောက်စရာ ယန္တယားကြီး အသက်ပြန်ဝင်လာပြီလား
တိုင်းရင်းသားထိပ်သီးအစည်းအဝေး တက်ရောက်မည့် ခေါင်းေ...
တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ တတိယအကြိမ် ညီလာ...
ငြိမ်းချမ်းရေး နောက်မဆုတ်ဘူးလို့ ၀န်ကြီး ဦးအောင်မ...
"ပလောင်ပြည်နယ်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦး PSLF/TNLA ၏ ဗဟို...
မြန်မာဒုက္ခသည်များနှင့်ပတ်သက်၍ ထိုင်းအစိုးရ သဘောထား...
မြန်မာဒုက္ခသည်ပြန်လာရေး အခက်အခဲ ကုလထောက်ပြ
MPC နဲ့ NCCT ထပ်မံ တွေ့ဆုံ
နေရပ်ရင်းပြန်ပို့မယ့် ထိုင်းအစိုးရအစီအစဉ် ဒုက္ခသည်ေ...
The X Factor Australia 2014 - First Week - တေးလက်ေ...
တနင်္သာရီမြို့နယ် ကေအဲန်ယူဒေသအတွင်း အစိုးရတပ်များ ပိ...
KNU Chairman Speech on Karen Natioanl Defence Day
ဗိုလ်ချူပ်ကြီး စောတာမလာဘော ဈာပန အခမ်းအနား (ရုပ်သံ...
ရဲဘော် စောဂျက်ကောမှ ပြန်လည်ပြောပြသော ဆဲဗင်းဂျူ လို...
အာဏာ နိုင်ငံရေး နှင့် ဘာသာရေး ရောယှက် လက်ဆက်မှု
The Voice Kids - June-July 2014
NCCT နှင့် ပြည်တွင်းနိုင်ငံရေးပါတီ ၁၄ ခု ငြိမ်းချမ...
ဗိုလ်ချူပ်ကြီးစောတာမလာဘော၏ တော်လှန်ရေး ၀ိဥဏ်
ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ၊ ရှမ်းပြည်တပ်မတော၏ ထုတ်ပြန...
UNFC နှင့် ပြည်တွင်းဒီမိုကရေစီအင်အားစုများ တွေ့ ဆံ...
SSPP/SSA ထိန်းချုပ် ဒေသ၌ အစိုးရ တပ်အင်အား တိုးချဲ့...
၆၅ ကြိမ်မြောက် KNLA ကရင့်အမျိူးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်...
အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးစာချုပ်နဲ့ NCCT (ရုပ်သံ)
ကွယ်လွန်သူ KNU ခေါင်းဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ် တာမလာေ...
ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး-ကေအဲန်ယူ ဥက္ကဌဟောင်း ဗိုလ်ခ...
KNU ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး ဥက္ကဋ္ဌဟောင်း ဗိုလ်ချုပ်ြ...
ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောတာမလာဘော ဈာပန လူထုထောင်ချီ တက်ရေ...
ကျ ပ်သိန်း ၇၀၀ တန် KNLA စစ်ဦးစီးချုပ်၏ကား ရန်ကုန်...